Kemgbe 10 afọ, ọtụtụ nde mmadụ chere na otú bara uru ọ bụ na-a ụgbọ okporo ígwè! Rich ubi nke greenery, mmiri na-egbuke egbuke, na ugwu pristine kpụkọtara ọnụ ekwughi banyere broshuọ njem ma ọ bụ blọọgụ. Ewere ụgbọ okporo ígwè bụ a fun, adaba, na ụzọ akpa ego-enyi na enyi iji nweta isi A ruo ebe B, n'ihi ya, anaghị eche echiche ugboro abụọ, na-ụgbọ okporo!
The abụọ dị ukwuu banyere ụgbọ oloko na Europe na n'ozuzu bụ otú mmefu ego-enyi na enyi ha nwere ike ịbụ. Ọ bụghị naanị na e ji enwe ọtụtụ ọnụ ala ebe ịhọrọ site na, kamakwa ọtụtụ ụzọ ibelata n'ozuzu njem mmefu. Ya mere ọ bụrụ na ị na-agụ see ụgbọ okporo ígwè mgbe anya, ebe a bụ ole na ole oké Atụmatụ iji:
Ma ị na nwata akwụkwọ hụrụ onwe ya n’anya ma ọ bụ onye njem oge niile na-ebu ụgbọ oloko kwa ụbọchị, na-ehi ụra na a ụgbọ okporo ígwè nwere ike nwere ike igbutu ego nọrọ na ulo fọrọ nke nta na ọkara. Ọ bụ ihe ịrịba ụzọ zọpụta oge oke dị ka ị na-ada n'ụra na otu obodo na-eteta ọzọ. Ebe ahụ kwuru na, ọ dị mkpa ịghọta na iche iche nke abalị ụgbọ okporo ígwè ụlọ.
Were A Train ka Zọpụta-A-Train, họrọ ebe ị na-aga, na-ụgbọ okporo ígwè ka ihe fọrọ ebe ọ bụla na Europe na ndị kasị oké ọnụ ahịa na ahịa! na, maa amụma? Mgbe ị na-ụgbọ oloko gị tiketi na Save A Train, The ntinye akwụkwọ usoro a na-eme n'ime 3 nkeji, ka abịa akpa gị ma na-enwe ihe niile na-eso!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#n'abalị #traveleurope ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ traveltips